[06 / 12 / 2019] EN50155 sy solosaina voamarina E-Mark ho an'ny fitaterana manan-tsaina	34 Istanbul
[05 / 12 / 2019] Ny Direction Générale de làlambe dia nandefa fiara vaovao	03 Afyonkarahisar
Andro: 4 Novambra 2019
Ny fomba nahaterahan'ilay marika Anadol automobile
xnumx'l taona mandra-nisy fiara afa-tsy ny sasany Eoropeana, Amerikana fiara sy Torkia. Mifanaraka amin'ny fangatahan'ny filoha Cemal Gürsel amin'ny fananganana fiara nasionaly taorian'ny revolisiona 1960, Eskişehir Tülomsaş dia niorina tao 1960. [More ...]
Ny famatsiam-bolan'ny rafitry ny toekarena Indiana sy ny rafi-by
Ny famatsiam-bolan'ny rafitry ny toekarena Indiana sy ny rafitry ny lalamby: Ny Repoblikan'i India no faritra ara-jeografika fahafito lehibe indrindra eran'izao tontolo izao ary ny mponina faharoa lehibe indrindra. Ny isam-ponina dia 1,3 miliara, ary ny faritra dia 3.287.259 km². [More ...]
Indostria Tiorka 5-10 an-tapitrisany amin'ny fanondranana Euro raha toa ka mandefa fitaovam-piadiana an'arivony tapitrisa dolara Euros Euros any ivelany
Ny indostista indostey 5-10 tapitrisa Eurô hanondrana, hamorona asa eto amin'ny firenena aho amin'ny ezaka iray lavitrisa Euros any amin'ny firenena ho any amin'ny vahiny. Ao amin'ny 2009, ny malemy ho an'ny fiara ambanin'ny tany 32 izay natao tany İzmir [More ...]
24 fitaterana Ora any Sanliurfa
Tiorkia lava indrindra ao amin'ny tambajotra dalana Sanliurfa olom-pirenena manana iray amin'ireo tsara indrindra fanompoana mikendry Metropolitan Monisipaly, dia nankany fanitsiana farany ao amin'ny taranak'i No. 71 76 ora 24 voalamina tsipika [More ...]
Ny Tetikasa Bursa Metro dia mbola miandry, sonia amin'ny lalamby Konya
Manana zo ny Kentis ny loha masiny ny Torkia ny toekarena, fa tsy afa-miala. Na ny lalamby na ny lalamby haingam-pandeha anao na ny làlam-piaranao an-dalana eo anelanelan'ny distrika. Omaly, namana iray izay niahiahy momba an'i Bursa dia nandefa izany tamin'ny e-mailay. Konya [More ...]
Miorina amin'ny fandaharan'asan'ny filankevitry ny minisitra ny Bursa High Speed
Miorina amin'ny fandaharan'asan'ny filankevitry ny minisitra ny Bursa High Speed; Ny Vaomiera momba ny fitaterana izay namboarin'i Mehmet Albayrak, Lehiben'ny sampana Bursa ao amin'ny Chamber of Civil Engineers dia mikendry ny hamoaka sy hanome soso-kevitra eo ambanin'ny talen'ny fitaterana an-tanàn-dehibe. Tamin'ny taloha ında Rehefa nesorina tamin'ny lalamby Osmangazi ny lalamby [More ...]
Lozam-pifamoivoizana teo amin'ny Station Gaziray : Kaominin'i Metropolitan Gaziantep, tohanan'i TCDD'in Gaziray Suburban Project eo amin'ny toby teo amin'ny tany nirodana no nitranga ny lalana Başpınar. Şahinbey izay nahazo fampahalalana avy amin'ny manampahefana tamin'ny fanaovana fanadihadiana tany amin'ny faritra [More ...]
Mivory ho an'ny taona 50 ny lalamby
1974-1975 nahazo diplaoma tamin'ny Sekolin'ny asa fanatanjahantena Eskişehir Railways; Nizara ny 'fahatsiarovana ny antsasaky ny taonjato' izy ireo tamin'ny fihaonana sy fiaraha-mientana amina fivoriana tao amin'ny efitrano iray tao amin'ny Hall of Tülomsaş ao Eskişehir. Ny Repoblikan'i Torkia State lalamby (TCDD) Sekoly fiofanana arak'asa 1974- 1975 [More ...]
Ny Bolu dia nandany ny ankamaroan'ny fitaterana
Ny Bolu dia nandany ny ankamaroan'ny vola tamin'ny fitaterana; Torkia Antontan'isa Institute, araka ny angona navoakan'ny faritra Istanbul Tale, tokantrano nandany vola indrindra ao Bolu fitaterana. Torkia Statistics Institution in Kocaeli Region [More ...]
Fanazavana ny fitateram-bahoaka avy ao amin'ny kaominina Metropolitan Istanbul
Filazana avy amin'ny IMM momba ny Bus Public mankany Dalan Durağı any Beşiktaş; Besiktas amin'ny lalana ampitan'ny ortakoy 13 fiara fitateram-bahoaka tsy ho tratran'ny zotram-pifamoivoizana raha tsy mifindra mankany amin'ny toby fiasana naratra. Ny iray izay naratra dia tompon'andraikitra amin'ny fidirana an-tsehatra rehetra. [More ...]
Tonga tany Ankara tamin'ny volana Novambra ny fiaran-dalamby fiarabe voalohany avy any Chine mankany Eropa
niainga avy any Shina, ny entana voalohany fiaran-dalamby handalo an'i Eoropa mampiasa Marmaray China Railway Express, dia niditra tao Torkia alalan'ny Kars. 6, izay hipetrahan'ny fiaran-dalamby any Ankara Station, dia i Cahit Turhan, Minisitry ny fitaterana ary ny fotodrafitrasa. [More ...]
Ny lamasinina voalohany ny Iron Lasoà Road efa niditra tao Torkia; Shina sy Torkia ambany ny mpitarika ao amin'ny firenena, ary hisy fiantraikany ny 65 3 lavitrisa mponina, "One Belt One Road" fanakianana dingana ny tetikasa dia vita tamin'ny Istanbul. Faha-tetik'asa [More ...]
Nanambara i TÜVASAŞ fa handray mpiasa injeniera 12 izy ireo ho an'ny tetikasan'ny fiarandalamby nasionaly. Nahazo diplaoma tamin'ny departemantan'ny mekanika, elektronika, indostrialy, metallurgical, rindrambaiko ary injeniera amin'ny solosaina ao amin'ny National Train Project. [More ...]
Voasonia ho an'ny Metro Konya! : Ny ben'ny tanàna ao amin'ny Konya Metropolitan Konya Uğur İbrahim Altay dia nanambara ny fanaovana sonia ny Konya Metro avy ao amin'ny kaontiny media sosialy. CMC sy Taşyapı Consortium ary AYGM [More ...]
Lalana ara-barotra vaovao! Tanjona ara-tantara mankany Etazonia
Tonga tany Chine ny fiaramanidina fiaramanidina roa izay niankandrefana avy tany andrefan'i Rosia tamin'ny alalan'ny lelam-by glacier Arctic. Ny lalana sy ny solika fitaterana dia hafatra ho an'i Etazonia. Ireo lalan-drano voafehin'ny Tafika Amerikana amin'ny alàlan'ny lalana [More ...]
Alarko Holding, ao anatin'izany ny VAT 619 tapitrisa euros, izay handray anjara amin'ny tetik'asa 4 lavitrisa kilao. Na izany aza, ny vaovao ratsy dia avy any Romania. Tamin'ny volana Janoary tamin'ity taona ity, nanomboka tamin'ny Alarko Holding to the Public Disclosure Platform [More ...]
Nambara fa fiara maherin'ny 2018 tapitrisa mahery, ao anatin'izany ny fiara 103 an'arivony sy kamiao 795 an'arivony, efa nandalo nanomboka ny volana Mey 8 ka nalefa avy any amin'ny tetezana Crimean mampifandray an'i Krasnodar sy Crimea eo amin'ny tsipika Kerch. [More ...]
Androany amin'ny tantara: biraon'ny 4 Novambra 1955 Eskisehir
Androany ao amin'ny Tantara 4 Novambra 1910 Rosiana sy Alemana dia nanapa-kevitra ny tsy hametraka fanamby ho an'ny tsirairay ao Postdam mikasika ny tombontsoa azony tamin'ny alàlan'ny Fanjakana Ottoman. Nifanaraka tamin'i Tehran ny fanjakana roa mba hifandray amin'ny lalamby Baghdad. [More ...]
EN50155 sy solosaina voamarina E-Mark ho an'ny fitaterana manan-tsaina
Androany amin'ny tantara: 6 Desambra 1938 Adana Central Station
Mars Logistic Marketing Marketing asa